Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostria maoderina sy ny fanatsarana hatrany ny fari-piainan'ny olona, ​​hitombo hatrany ny fangatahan'ny olona amin'ny boaty fanangonana. Noho izany, ny mpanjifa izao dia nametraka fepetra avo lenta kokoa amin'ny kalitaon'ny boaty fonosana. Noho izany dia mila fampiharana teknolojia vaovao ...
Inona avy ireo fiasan'ireo boaty fonosana?
Nanjary fitaovana marketing matanjaka ny ady totohondry. Ny boaty fonosana voalamina tsara dia afaka mamorona sanda mora ho an'ny mpanjifa sy sanda fampiroboroboana ho an'ireo mpamokatra. Antony isan-karazany no hampiroborobo ny fampandrosoana ny fonosana ho fitaovana marketing amin'ny fampiharana. Satria mihabe ny vokatra amidy ...
Firy ny fizotrany amin'ny fanaovana boaty fanomezana?
Satria nanjary nalaza tato ho ato ireo boaty fanomezana, dia mihamaro ny olona liana amin'ny fanaovana boaty fanomezana azy manokana. Ny ankamaroan'ny boaty fanomezana avo lenta amin'ny fiainana andavanandro dia vita amin'ny taratasy, ary ny tontolon'ny taratasy dia mety indrindra amin'ny fikarakarana bebe kokoa. Na dia tsotra aza ireo boaty fanomezana, ...